ESI LELEE FAỊLỤ NA NCHEKWA NA WINDO - KỌMPUTA EGWU - 2019
Ndozi nsogbu ahụ na faịlụ na nchekwa zoro ezo na ngwa flash
Otu n'ime nsogbu ndị na-ebili mgbe ị na-eji windo mbanye, bụ faịlụ na nchekwa dị na ya. N'ọtụtụ ọnọdụ, atụla egwu, n'ihi na ọdịnaya nke ụgbọelu gị, dị ka ọ dị, zoro ezo. Nke a bụ nsonaazụ nke nje ahụ na-ebute ụgbọala gị nke mbu. Ọ bụ ezie na nhọrọ ọzọ - - ụfọdụ geek maara nke ọma kpebiri igwu gị. N'ọnọdụ ọ bụla, ịnwere ike idozi nsogbu ahụ n'enweghị enyemaka, ma ọ bụrụ na i soro ndụmọdụ ndị dị n'okpuru.
Esi lelee faịlụ na nchekwa na windo
Nke mbụ, gbasaa mgbasa ozi na usoro antivirus iji kpochapụ pests. Ma ọ bụghị ya, omume niile ịchọta data zoro ezo nwere ike ịbụ ihe efu.
Lelee nchekwa na faịlụ site na:
ndị na-eduzi ihe;
Ọ dịghị mkpa iji wepụ ihe ọmụma zuru ezu n'ihi nsogbu ndị ọzọ dị ize ndụ ma ọ bụ ihe ndị ọzọ. Ma, ihe gbasara nke puru omume nke ihe dị otú a dị ala. Ka o sina dị, ị ga-arụ ọrụ ndị a ga-akọwa n'okpuru ebe a.
Usoro 1: Ọchịchị niile
Iji jiri Total Commander, mee nke a:
Mepee ma họrọ otu ụdị. "Nhazi". Mgbe nke ahụ gasịrị, gaa na ntọala.
Chetara "Ọdịnaya Panel". Tinye akọrọ "Gosi faịlụ zoro ezo" ma "Gosi usoro faịlụ". Pịa "Tinye" ma mechie windo nke na-emeghe ugbu a.
Ugbu a, mepee USB flash drive na Total Commander, ị ga-ahụ ya ọdịnaya. Dịka ị pụrụ ịhụ, ihe niile dị mfe. Mgbe ahụ, a na-eme ihe niile n'ụzọ dị mfe. Họrọ ihe niile dị mkpa, mepee ụdị "Njikwa" ma họrọ otu ihe "Gbanwee Ebumnuche".
Chọpụta àgwà "Zoro ezo" ma "Usoro". Pịa "OK".
Mgbe ahụ i nwere ike ịhụ faịlụ niile dị na drive mbugharị. Enwere ike imeghe nke ọ bụla, nke a na-eji pịa abụọ.
Lee kwa: Otu esi edozi bọọ si USB flash drive
Usoro 2: Njirimara ntọala nke Windows Explorer
N'okwu a, mee nke a:
Mepee USB flash mbanye na "Kọmputa m" (ma ọ bụ "Kọmputa a" na nsụgharị ọhụrụ nke Windows). Na nkpu n'elu, mepee menu. "Tọọ" ma gaa "Nhọrọ nchekwa na nchekwa".
Pịa taabụ "Lee". Gaa na ala na akara "Gosi nchekwa na faịlụ zoro ezo". Pịa "OK".
Ugbu a, faịlụ na nchekwa ga-egosiputa, ma ha ga-elegharị anya, dịka ha ka nwere àgwà ahụ "zoro ezo" na / ma ọ bụ "usoro". Nsogbu a ga-adịkwa mma iji dozie. Iji mee nke a, họrọ ihe niile, pịa bọtịnụ aka nri ma gaa "Njirimara".
Na ngọngọ "Àgwà" nyochaa ihe nlele ọ bụla na pịa "OK".
Na windo nkwenye, họrọ nhọrọ nke abụọ.
Ugbua ọdịnaya nke flash drive ga-egosiputa dika aturu anya. Echefukwala itinye ọzọ "Unu egosila nchekwa na faịlụ zoro ezo".
Okwesiri igosi na usoro a adighi edozi nsogbu ahu mgbe ejiri ya "Usoro"ya mere ọ ka mma iji iji Total Commander.
Lee kwa: Na-eduzi ichebe flash mbanye site na ederede
Ị nwere ike ịkagbu àgwà niile akọwapụtara site nje ahụ. Ihe ntụziaka dị na nke a ga - adị ka nke a:
Mepee menu "Malite" ma tinye na ajụjụ ọchụchọ "cmd". Nsonaazụ ga-egosipụta "cmd.exe", nke ị chọrọ pịa.
Dee na njikwa
cd / d f: /
Lee "f" - akwụkwọ ozi nke ọkụ mbanye gị. Pịa "Tinye" (ọ "Tinye").
Nzọ ọzọ ga-amalite site na njide ụgbọelu. Deba aha
agwa -H -S / d / s
N'ezie, faịlụ na folda zoro ezo - otu n'ime "aghụghọ ruru unyi" nke nje virus. Ịmara otu esi dozie nsogbu a, jide n'aka na ọ dịghị ebili ma ọlị. Iji mee nke a, na-enyocha ngwa antivirus nke mbughari. Ọ bụrụ na ịnweghị ike iji ngwangwa nje virus ndị dị ike, were otu n'ime ihe mgbapụ nje nje pụrụ iche, dịka ọmụmaatụ, Dr.Web CureIt.
Lee kwa: Otu esi etinye paswọọdụ na windo USB